Jose Mourinho ayaa ku adkeysanaya in kooxdiisa Tottenham ay dib u heshay maskax guul isla markaana ay ka adkaan doonto Manchester United iyo City markii ugu horeysay.
Tottenham ayaa xalay gaartay finalka Carabao Cup markii ugu horreysay muddo 13 sano ah, waxaana ugu dambeysay sanadkii 2008.
Jose Mourinho ayaa seddex jeer koobka la qaaday Chelsea, hal jeerna wuxuu la qaaday Manchester United, wuxuuna haatan Tottenham u qaadayaa finalka isagoo heysta fursad weyn oo uu koobka ku qaadi karo.
Tababaraha reer Portugal oo lahadlayay warbaahinta markii ay kooxdiisu u gudubtay fiinaalka xalay, wuxuu yiri: “Waxaan imid England 2004, waxaan xasuustaa waqtigaas inaan halkaan ku bartay qiimaha koobab, mar walbana waxaan uqaadaa si dhab ah
“Hadii uu jiro wax qarsoodi ah, waa inaan marwalba u halgamay koobab isla markaana aan ixtiraamayay tayada kooxaha yar yar.”
Mourinho ayaa ku amaanay kooxdiisa “maskax guulaysiga”: “Waxaan dareemay in kooxdu leedahay maskax lagu guuleysto, wiilashu runtii way ka qeyb qaateen tartanka, hadaad eegto guuleystayaasha waxaad arkeysaa in kooxaha waa weyn ay doonayaan inay guuleystaan”.
Tottenham ayaa finalka la ciyaari doonta midkood Manchester United ama Manchester City finalka Abriil 25, ciyaartoyda Tottenham ayaa ku qanacsan in labada kooxba ay qaadi karaan koobka.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham Moussa Sissoko ayaa yiri: “Waxaan sugeynay fursadan oo kale muddo dheer. Waxaan aadeynaa Wembley si aan ula ciyaarno United ama City waana inaan diyaar u nahay.”
Lionel Messi ayaa sabab u ah Kevin De